Leliphi elona xesha lilungileyo lokuzilolonga | Amadoda aneSitayile
Leliphi elona xesha lilungileyo lokuzilolonga
UAlicia tomero | | Kufanelekile, ukuphila qete
Abantu abaninzi bayazibuza ukuba ithini na elona xesha lilungileyo lokuzilolonga. Enyanisweni, kuyinyaniso ukuba asiyazi, kodwa kwithiyori sikholelwa ukuba yinto yokuqala ekuseni xa iikhalori ezininzi zitshiswa.
Imidlalo kunye nexesha lokuziqhelanisa lijika libe yinto yokuziqhelanisa nazo zonke izinto ezithandayo. Ukuba ukuqhelisela kuthetha ukuba unciphisa umzimba, ngokuqinisekileyo ufuna ukwazi ukuba yintoni owona mzuzu ulungileyo wosuku ukuyiqhelisela. Ngokutsho kwezinye iingcali kukho iingcamango ezininzi kwaye zonke kufuneka zihlaziywe.
1 Elona xesha lilungileyo lokuzilolonga
1.1 Yenza imidlalo kusasa
1.2 Yenza imidlalo ebusuku
1.3 Zeziphi iiyure esizikhethayo?
2 Kubalulekile ukwenza imidlalo rhoqo
Elona xesha lilungileyo lokuzilolonga
Kukho iingcamango ezahlukeneyo ezixhasa ukuba lelona xesha lifanelekileyo lokudlala imidlalo. Ngokoluvo lwabaninzi, kukulandela inkqubo yesiqhelo kwaye uyenze xa ucinga ukuba umzimba wakho wamkeleke kakhulu ekwenzeni oko.
Yenza imidlalo kusasa
Ibisoloko inxulunyaniswa into yokuqala ekuseni for qala usuku ngawo onke amandla kwaye ube nako ukutshisa bonke abo vimba ubashiyileyo. Ukuba ufuna ukufumanisa ngakumbi ngale thiyori, kukho iziseko ezininzi ezixhasayo:
Ukuqala usuku kwenza umzimba wakho usebenze konke izingqisho ze-circadian, kukho amandla amaninzi kwaye oko kukhuthaza umsebenzi ukuba wenziwe ngomzamo omncinci. Kwakhona, ukuba kwenziwa kwisisu esingenalutho kuya kuba ngcono kakhulu ukunciphisa umzimba.
Ezinye iingcali sele zilindele ukutsho ukuba elona xesha lilungileyo inokuba sekulo 7 ekuseni, ekubeni uvula iwotshi yebhayoloji kwaye oko kuthetha ukutshisa ngakumbi kwaye usebenze ngakumbi emini. Ukuba, ngokuchaseneyo, kwenziwa ekupheleni kosuku, ezi zibonelelo ziya kuncipha.
Ngaba kufuneka wenze imidlalo kwisisu esingenalutho? Ngokwenene ngumbandela wobuqu, ekubeni ezinye iincwadi zithi ukuzila ukutya kubangela ukuba kutshiswe yonke loo mithombo. Kodwa ayisiyiyo idatha eqinisekileyo, kuba kukho imizimba efuna ukuvuka inento esiswini kwaye iimbaleki ezikwinqanaba eliphezulu azinakukwazi ukuyifikelela.
Kwanentsasa inezinye izibonelelo ezininzi. Abantu baqala usuku benomzimba osebenza ngakumbi kwaye oko kubangela i-metabolism. Xa kusenziwa imidlalo ngeli xesha iihomoni zolonwabo zifihliwe (i-endorphins, i-serotonin kunye ne-dopamine) kwaye oko kukhokelela ekubeni bathathe ukusebenza imini yonke. Bathwala inzuzo kunye nolawulo loxinzelelo kwaye bakwenza uzive uphakanyiswe ngakumbi.
Ukuba sinobuganga bokuvuka kwangethuba siya kuphucula umjikelo wokulala kwaye iya kusinceda ukuba silale ngcono ebusuku. Kubantu abaninzi, yenza ukuba ukuqala kwemini ngale ndlela yongeze ukonyuka kwamandla, kusebenze zonke iimvakalelo kwaye kubancede bagxile ngokulula.
Yenza imidlalo ebusuku
Ezinye iithiyori zixhasa ukudlala imidlalo ebusuku. Bade bavume ukuba kungcono ukuziqhelanisa ngeli xesha hayi kusasa. Iingcali zenzululwazi kwi-Weizmann Institute of Science (Israel) zavuma idatha esebenzayo kuya kuba luncedo ngakumbi, ukususela ngeli xesha umzimba Isebenzisa ioksijini encinci kakhulu. Bade baxhase inkcazo-bungcali yabo ngokubonisa ukuba kuxa sinamandla amakhulu kunye namandla, kwaye ngoko ke ukuxhathisa okukhulu.
Umzimba unobushushu bomzimba obuphezulu kakhulu kwaye kulula kakhulu ukuzifudumeza xa usenza umthambo. Ngale ndlela, isingqisho esingcono soqeqesho siyafezekiswa. ukufumana ukuchitha iikhalori ezininzi ngakumbi. Amadoda nawo anenzuzo yawo enkulu, kuba ngeli xesha anencopho yawo ephezulu ye testosterone kwaye ke ngoko anamandla amakhulu.
Zeziphi iiyure esizikhethayo?
Iimbaleki ezininzi kunye neengcali zokuqina komzimba ziyavumelana ekukhetheni eyona ifanele ishedyuli engcono kwaye nokuba xa umzimba uwufuna. Awukwazi ukwenza umthambo kusasa ukuba umzimba wakho awukalungeli ukuyenza, okanye xa ungaziva ngathi. Ukuba siyenza ngokuthandabuza, inqanaba lokuqina liya kuba lisezantsi kakhulu kwaye ngoko aliyi kusebenza kakuhle. Kukho abantu abade balinde ukuyenza ngokuhlwa kwaye imizimba yabo idinwe ngakumbi. Kungcono ukuyenza xa umzimba wakho unamandla kwaye unemveliso.
Kubalulekile ukwenza imidlalo rhoqo
Awudingi ukunamathela kwidatha xa ucinga ukuba kungcono ukuyenza ekuseni okanye ebusuku. Iingcali zincoma ukwenza xa 'umzimba nengqondo' zikufuna kwaye ukhululiwe. Kuyacetyiswa ukuba ukwenze ngaphandle kokuthathela ingqalelo ishedyuli kunye nokuba yenze ngokuqhubekayo ukuze umzimba uqhelane naloo ndlela. Uqeqesho lweveki kunye nokutya okulungileyo kuya kukwanela ukufezekisa umphumo ongcono.
Ukuba ingcamango ikukwenza umthambo ukuze uphucule impilo okanye inkangeleko yomzimba, kubhetele ugxininise ukuba ufanele ukwenze oko xa umzimba uwufuna. Abantu abaninzi benza oko xa ubomi babo bomsebenzi okanye iimfuno mabakhethe ixesha lokuyenza Kwaye nangona ixesha liphantsi komxholo, eyona ndlela ilungileyo kukwenza oko xa iimfuno zomzimba wakho zikuvumela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » Leliphi elona xesha lilungileyo lokuzilolonga
Kutheni indoda iphepha umfazi emthandayo